တီအာဝိုင် : ခင်သာဇာတိ မောင်သာဂိ (၃)
သာဂိလည်း အဝတ်အစားအနည်းငယ်ကို အိတ်တစ်လုံးနှင့်ထည့်ရင်းသွား ရန်ပြင်နေ သည်။ ဒေါ်ရင်မှုန်ကတော့ မသွားရန်တားဖို့ သာကြိုးစားသည်။ သာဂိအနားသို့ သွား၍ "မနက်စောစောမှထသွားပါလားသားရယ် ၊ အဲ့ဒိ အဘချိုနေတဲ့ လဲကွင်းထဲမရောက်ခင်ရွာ အထွက်ကသင်္ချုင်းကုန်းနားမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာသားလဲသိသားနဲ့ " ဟုချော့ပြောလို့ မရနိုင်တော့မှန်းသိ၍ချောက်ပြောကြည့်သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ၄င်းရွာအထွက်၌ သရဲအခြောက်ခံရသော ဇာတ်လမ်းအမျိုးမျိုးကို မကြာမကြာကြားရတတ်ပါသည်။တ ခါတရံတွင်သစ်ပင်ပေါ်မှလူတယောက်ခုန်ချပြီး ဂုတ်ခွစီးသည်ဟူသောဖြစ်ရပ်များကြားရသလို တခါတရံတွင်လည်း နပန်းအလုံးခံရသည် ဟူသော ဖြစ်ရပ် များကိုကြားရတတ်ပါသည်။ ဦးသာလှ၏အကိုကြီးဖြစ်သူ ဦးသာမြသည်ပင်လျှင် ညအရက်မူးမူးနှင့် "ဘယ်ကောင်လဲကွ သရဲဆိုတဲ့အကောင်သတ္တိရှိရင် ထွက်ခဲ့စမ်းကွ" ဟုသွား၍စိန်ခေါ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့် ညလုံးပေါက်နပန်းလုံးခဲ့ဘူးသည်ဟုဆို၏။
ဘယ်သူတွေဘယ်လို ပြောပြော သာဂိကတော့သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ တာဝန်သိရင် တာဝန်ရှိတယ်၊ တာဝန်ရှိရင်တာဝန်ပိတယ်၊ အဲ့ဒိပိလာတဲ့တာဝန်ကို ယူရဲတာဟာ သူတော်ကောင်း သူရဲကောင်း ဟု သာဂိကခံယူသည်။ ထို့ ကြောင့်ညစာထမင်းကို ရေးကြီး သုတ်ပြာ စားပြီး အိမ်က ထွက်မည် အပြုတွင် ဒေါ်ရင်မှုန်က "ဒါဆိုရင်လည်းသားရယ် မိုးဒီကိုအဖော်ခေါ်သွားပါလား" ဟုဆက်ပြောသည်။ သာဂိက "မလိုအပ်ပဲ ဘယ်သူ့ အကူအညီမှ လွယ်လွယ်နဲ့ မယူချင်ဘူး’’ ပြောပြီး အဝတ်အိတ်တစ်လုံး၊ လေးဂွလွယ်အိတ်နဲ့ ကြိမ်လုံးတစ်လုံးကိုလက်မှဆွဲပြီးထွက်သွားပါလေတော့သည်။
သာဂိ အိမ်မှထွက်ခဲ့သောအချိန်သည် ညကိုးနာရီကျော်နေပြီဖြစ်၍ ဖယောင်းတိုင်မီး ကိုအားပြုသုံးနေကြသောရွာလေးတရွာအဖို့ အတော်လူချိန်တိတ်သောအချိန်ဟုဆိုရပေမည်။ လကတော့ ထိန်ထိန်သာနေသည်။ သို့ သော်တောရွာတို့ ၏ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းအုပ်ဆိုင်းနေသော သစ်ပင်များ၏ အရိပ်ကြောင့်လရောင်သည် အလွန်တရာတောက်ပမှုမရှိပဲ ကွက်ကြားအလင်းရောင်လေးမျှသာရှိပါသည်။ ရွာအထွက် ဖြစ်သောသင်္ချိုင်းအနီးသို့ ရောက်သောအခါ၌စွဲစွဲငင်ငင်အူလိုက်ခွေးတစ်ကောင်၏အသံကြောင့် သာဂိကြက်သည်းမွေးညင်းများပင်ထလာမိသည်။ သို့ သော် နောက်ဆုတ်ဖို့ တော့လုံးဝစိတ်မကူးမိပေ။ ဒီလိုနှင့် ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ "ဒကာလေးသာဂိရဲ့ မည့်သည့်သတွါမဆိုအနာဂါမ် ရဟန္တာမဖြစ်မချင်း အကြောက်တရားဆိုတာ ရှိကြတယ်ကွဲ ၊ အေး အဲ့ဒိလို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပဲလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူကို သူရဲကောင်းလို့ သက်မှတ်ကြတယ်ကွဲ့ " ဟူသော ဆရာတော်၏ စကား
တခွန်းကိုနားထဲတွင် ပြန်လည်ကြားယောင်မိ၍အနည်းငယ်သတ္တိပြန်ရှိလာသလိုလိုခံစားရသည်။ ထို စဉ်လျှပ်တစ်ပြက် အသဲပါပွင့်ထွက်မတက်ဖြစ်ပြီးငယ်သံပါအောင်အော်ပြစ်လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားသည်။ လူခန္ဓာကိုယ်ထက် အတော်အတန်ကြီးပြီး မဲမဲသဲသဲ နှင့်ငုပ်တုတ်ထိုင်နေသောအရာနှစ်ခု ကို အဝေးမှလှမ်းတွေ့ လိုက်၍ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန်လှည်ပြေးရရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားမိသည်။ အမေ့စကားနားမထောင်မိတာ ငါတော့မှားပြီလား ဟုတွေးပြီးတော့လည်း နောင်တရချင် သလိုလို ဖြစ်လာသည်။
သို့သော်နောက်ပြန်ဆုတ်မဲ့အစားတော့ နပန်းပဲလုံးရင်လုံးရပါစေတော့ ဟုဆုံးဖြတ်၍ဆက်
လျှောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ နောက် လေးဂွကို သတိရသွားသည်။ ဟုတ်တယ် ငါ့မှာ လေးဂွပါတာပဲ လေးဂွနဲ့ ပြစ်မှဟုစိတ်ကူးပြီးမှ အင်း သရဲ ဆိုတာတွေ့ရခဲတယ် လေးဂွနဲ့ ပြစ်လိုက်လို့ ထွက်ပြေးသွားရင်း အနီးကပ်မမြင်လိုက်ရပဲ နေဦးမယ် ဟုစိတ်ကူးပြီး လေးဂွကို ပြန်သိမ်းထားလိုက်သည်။ ထို့ နောက်ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ တ ဖြည်းဖြည်းနီးသည်ထက်နီးလာသည် ။ ထိုနှစ်ကောင်ကတော့ လုံးဝမလှုပ်။ ကြိမ်လုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။’’ရွှန်း ရွှန်း’’ အားရပါးရရိုက်ပြစ်လိုက်သည်။ ဘာမှပြန်မလုပ်။ ပြီးတော့မှာ ညသန်းခေါင် သင်္ချိင်းအနီးရှိ အုပ်ဆိုင်းနေသော တောအုပ်ထဲတွင် တယောက်တည်း အူတက်အောင်ရယ်လိုက်ပါတော့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူထင်ထားသော ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည့်သရဲနှစ်ကောင်မှာ သရဲမဟုတ်ဘဲ ရွာထဲမှ လူများ လာရောက် အရက်ချက်သည့် ရာဝင်အိုးကြီးနှစ်လုံးဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်တည်း။ ကြောက်စိတ်များလည်း လွင်ပြယ်သွားပြီ ဖြစ်၍ လေကလေးတချွန်ချွန်ဖြင့် အဘချိုတဲသို့ ဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါသည်။တဲကိုရောက်သည်ဆိုရင်ပဲ အဘချိုက ဆီး၍ "ဟေ..ဘယ်လိုလဲသာဂိ သရဲငုတ်တုတ်တွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့သေးလား’’ မေးပါသည်။
"သိတာပေါ့ ခလေးရယ် မင်းတို့ လျှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့လမ်းတွေ အားလုံးဟာ အဘတို့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသားတွေချည်းပါပဲ’’ ဟုသွက်သွက်လက်လက် ပြန်ပြောလိုက်ပါသည်။ထိုအခါ သာဂိက အံ့သြသောမျက်နှာထားနှင့် "အဘချို တော်တော်သက်သာနေပြီနော်’’ဟုမေးလိုက်ရာ အဘချိုကလည်း "အေး သာဂိရေ မင်းရဲ့ စေတနာမှန်လို့ အဘလဲ သက်တောင့်သက်သာရှိနေပါပြီ ကွယ်..ဒါပေမဲ့ လူဆိုတာ ကွေးသောလက်ကိုမဆန့် မှီ ဆန့် သောလက်ကို မကွေးမှီ သေသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားကွဲ့…ပြီးတော့ အဘတို့ အရွယ်က မီးစာကုန် ဆီခန်း ဖြစ်နေပြီလေ…သေမယ်ဆိုတာ သေချာနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် အကောင်းဆုံးသေဖို့ ပြင်တာပဲကောင်းတာပေါ့ကွယ်’’ ဟု တည်ငြိမ်စွာပြောနေသဖြင့်သာဂိလည်း နားထောင်နေလိုက်သည်။ သို့ သော် အဘချိုဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ။နားလဲမလည်။ ထို့ ကြောင့် နားမလည်ရင် ချက်ချင်းထမေးတတ်သောအကျင့်က " ဘာတွေပြောနေတာလဲ" လို့ မေးလိုက်ချင်သည်။ သို့ သော်မိမိဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုပေးခဲ့သောဆရာတော်မိန်ထားသည့် "ဒကာလေးသာဂိရဲ့ မသိလို့ နားမလည်လို့ မရှင်းလို့ မေးတာလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ပါပဲ ဒါပေမဲ့ သူတပါးပြောတဲ့စကားကို မဆုံးသေးဘဲနဲ့ ဖြတ်ပြီး မေးခြင်း ဝင်ပြောခြင်းကို ဘယ်တော့မှမပြုလေနဲ့ အဲ့သလိုပြုတာဟာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့လူတွေရဲ့ အပြုအမူမဟုတ်သလို လူ့ဘောင်လူ့လောကထဲဝင်ဆံ့တဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ရပ်လဲမဟုတ်ဘူးကွဲ့သူတပါးပြောတဲ့စကားကို ဆုံးအောင်နားထောင် ပြီးမှကိုမေးလိုရာကိုမေးရတယ် အဲ့ဒိလို သူတပါးစကားဆုံးအောင်နားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုရအောင်မွေးထားရမယ်သာဂိရဲ့" ဆိုတဲ့စကားကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိ၍ အဘချိုသောပြောသောစကားများကိုဆုံးအောင်နားထောင်နေလိုက်သည်။ အဘချိုပြော၍စကားဆုံးသွားသောအခါ၌ "အဘချို အဘချိုအစောကပြောသွားတဲ့အထဲမှာမီးစာကုန် ဆီခန်းဆိုတာရယ် အကောင်းဆုံးသေဖို့ ပြင်တယ်ဆိုတာလဲပါတယ် အဲ့ဒါတွေကို ကျနော် တော့ နားမလည် နိုင်တော့ဘူး။ အဘရှင်းပြလို့ ရမလား" ဟုမေလိုက်ပါသည်။ ထိုစဉ်အဘချိုမှအသဲအသန် ချောင်းထဆိုးပါလေတော့သည်။ သာဂိက "အဘသက်သာလားရော့ရော့အဘရေနွေးလေး သောက်လိုက်ဦး" ဟုပြော၍ရေနွေးခွက်ကိုအဘချိုရှေ့ သို့ ချပေးလိုက်ရင်း "အဘချို ညဉ့်လည်းနက်နေပြီ အိပ်ချင်ရင်းအိပ်လိုက်တော့လေ..ကျနော်အိပ်ယာပြန်ပြင်မေးမယ်" ဟုပြောသည်။ "သက်သာပါတယ် သာဂိရယ် နေနေ အဘမအိပ်ချင်သေးဘူး။ မင်း မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်း ဖြေပေးမယ်။ ပြီးတော့ အဘရဲ့ နေဝင်ချိန်မှာ သာဂိလိုလူငယ်တစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အဘအနေနဲ့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်ဟေ့ အဲ့ဒိအတွက် အဘရဲ့ လျှို့ ဝှက်ထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောရင်း မင်း ဆီမှာလဲ အကူညီ နည်းနည်းတောင်းရလိမ့်မယ်..သာဂိ" ဟု နက်နက်နဲနဲ တွေးတောနေပုံဖြင့်ပြောရင်း ရေနွေးကြမ်းကို မော့သောက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ အဘချိုကဆက်လက်၍ "အေး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဘိဓမ္မာနည်းအရ လောကမှာရှိသမျှလူသားတွေအား ဟာ တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ
(၄)ဥပစ္ဆေဒကကံနဲ့ သေခြင်းရယ်လို့ သေခြင်းလေးမျိုးရှိတယ်ကွယ့်၊
ဥပစ္ဆေဒကံဆိုတာကတော့ တို့ အရပ်သုံးစကားနဲ့ ပြောရရင် အသေဆိုးနဲ့ သေခြင်းကိုဆိုလိုတာပေါ့၊ အေး အဲ့ဒိသေခြင်းလေးမျိုးထဲမှာမှ ကံကုန်လို့ သေခြင်းဟာ မီးစာကုန်သွားတဲ့ဆီမီးခွက်နဲ့ တူတယ်၊ သက်တမ်းလို့ သေခြင်းကတော့ဆီခန်းသွားဆီမီးခွက်နဲ့ တူတယ်၊ သက်တမ်းနဲ့ ကံနှစ်ပါးလုံးကုန်တယ်ဆိုတော့မီးဇာကုန် ဆီခန်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့သာဂိရယ်၊ ဒါကြောင့်အဘတို့ အရွယ်ဟာ မီးဇာကုန်ဆီခန်းဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုလိုတာပေါ့၊ အကောင်းဆုံးသေဖို့ ပြင်တယ်ဆိုတာကတော့ တချို့ ကတော့ နောက်ဘဝအတွက်စိတ်ချရအောင်လို့ ဆိုပြီးကြိုတင်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်း၊သီလ ဆောက်တည်ခြင်း စတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်၊ တချို့ ကတော့ ဒီဘဝမှာနောက် ဆံတင်းစ ရာဖြစ်နေမယ့် ကိစ္စတွေကိုပြီးပြတ်အောင်ပြုလုပ်ကြတယ်ကွယ်။ အဲ့ဒါကိုပဲသေဖို့့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်စင်တယ်လို့ ဆိုတာပေါ့ကွယ်။ အဘချိုအနေနဲ့ ကတော့ တသက်လုံးစိတ်ကို ဖြူစင်အောင်ထားခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒိလို စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခဲ့လို့ လဲမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်၊ နောက်ဘဝအတွက်ဘာမှ မပူဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီဘဝအတွက်တော့ မပြီးပျက်သေးတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးတယ်’’ ဟုပြောရင်း ပင်ပန်း သွားဟန်ဖြင့် ရေးနွေးတစ်ခွက်ကိုကောက်မော့လိုက်ပြီးတော့မှ ဆက်လက်၍ "အဲ့ဒိမပြီးပျက်သေးတဲ့ ကိစ္စ ဆိုတာကလည်း အဘကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ လူဆိုလို့ လဲသာဂိတစ်ယောက်ကိုပဲ မြင်တယ်ကွယ်" ဟုဆွေးမြေ့တုန်ရီသောအသံဖြင့်ပြောလိုက်သည်။ သာဂိက "အဘချိုဖြစ်ချင်တာကိုပြောပါ ကျနော်တတ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်ရင်ကျနော့်ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကူညီဖို့ အစဉ်သင့်ပါပဲ" ဟုပြောပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ ထားလိုက်သည်။ "အေး သာဂိရဲ့မင်းကအဲ့ဒိလိုမျိုး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲရှိတဲ့အတွက်တော့ အဘဝမ်းသာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒိတာဝန်ကလူတိုင်းကိုပေးလို့ မရဘူးကွဲ့ ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူကိုမခက်ခဲပေမဲ့ တွေဝေသွား စေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတခုမေးရလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒိမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်တဲ့သူသာလျှင် အဘတောင်းမဲ့ အကူအညီကိုပေးခွင့်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိကူညီမဲ့လူကို အဘရဲ့ဘဝခရီးတစ်လျှောက်ဖြစ်စဉ်တွေပြောပြရဦးမယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကို အဘရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမပြောပြခင်ပဲမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်၊ အဲ့ဒိမေးခွန်းကိုမှ မင်း ကမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင် အဘရဲ့အကြောင်းတွေကိုလဲပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊အကူညီလဲ တောင်းခွင့် မရှိတော့ ဘူး သာဂိရဲ့။ မင်း အဘကိုတကယ်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သေသေချာသေချာ စဉ်းစားပြီးမှ ဖြေစေ ချင်တယ်၊ နှစ်ခါပြန်လဲဖြေခွင့်မရှိဘူးလေ"…ဟုတည်တည်ငြိမ်လေးနက်လှသော်လည်း စိုးရိမ်မှု အချို့ ခိုအောင်း နေသောမျက်နှားထားနှင့်ပြောရင်း သာဂိရဲ့မျက်နှာကို စိုက်ကြည်လိုက်သည်။ သာဂိကလည်း "မေးမှာသာမေးပါအဘ သားရအောင်ဖြေပါ့မယ်" ဟုရဲတင်းသောအကြည့်ဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ "အေး
ဒါဆိုလဲမေးရတာပေါ့ကွာ" ဟုပြောပြီး…."ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုဘယ်အရာကသာလျှင် အလျှင်မြန် ဆုံးပြီးမြောက်စေနိုင်သလဲ"….ဟုမေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါသာဂိက မဆိုင်းမတွ ချက်ချင်းဖြေလိုက်သည်။ "ပညာ ပါအဘ" အဘချို အရမ်း အံ့သြ၍ဝမ်းသာသွားပြီး…."မင်း ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဘာကြောင့်မို့ အဲ့သလိုပြောနိုင်ရတာလဲ" ဟုအလောတကြီးမေး လိုက်သည်။ သာဂိကလည်း "ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် အဘ ကျနော်တို့ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ ဘုရားလေးဆူပွင့်ခဲ့ပြီးပြီ..အဲ့ဒိလေးဆူထဲမှာဗုဒ္ဓဂေါတမတဆူသာလျှင် ပညာကိုဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီးပွင့်ခဲ့တာမို့ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းသာ ပါရမီဖြည့်ပြီးဘုရား အဖြစ် ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ တယ်။ ရှေးရှေးသော ဘုရားရှင်တွေကတော့ သဒ္ဓါဓိကတို့ ဝိရိယာဓိက တို့ မို့ ဆယ်ခြောက်သင်္ချေ ဆယ်ရှစ်သင်္ချေနဲ့ အချိန်ကာလတွေအများကြီးပါရမီဖြည့်ပြီးမှ ဘုရားအဖြစ်နဲ့ ပွင့်တော် မူကြတယ်မ ဟုတ်လား...ကျနော်ကတော့ ဒါကိုကြည့်ပြီး ဒီလိုဖြေလိုက်တာပါ" ဟု အောင်မြင်သောလူ သားတစ်ယောက်၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား ပီတိပွါးသောလေသံလေးနှင့်ပြောလိုက်ပါတော့သတည်း။
Posted by Nan Shin at 1:10 PM